Ọnọdụ nke Infographics | Martech Zone
Infographics toro nke ukwuu na-achọ ka ha bụrụ akụkụ bụ isi nke anyị onyinye azụmahịa. Lọ ọrụ ndị na- na-agbatị ihe ọmụma na-aga n'ihu ịhụ nsonaazụ dị egwu. Ihe omuma ihe omuma bu ihe zuru oke nke ihe nile di nma nke uzo ahia ahia di nma:
data - ha na-enye ọtụtụ ozi na ngwugwu na-adị mfe igwu.
Design - mgbe emechara nke ọma, ha na-atọ ụtọ, na ọ na-atọkwa ụtọ ịgụ.
Mbufe - n'ihi na ọ bụ otu faịlụ onyonyo, ha dị mfe ịkekọrịta.
Social - a na - ekekọrịta ihe a na - ahụ anya dịka infographics ọtụtụ oge karịa ọdịnaya ndị ọzọ.
search - n'ihi na ha na-akọrọ ọtụtụ oge, ha na-agbasasị ịzigharị njikọ ndị ọzọ na onye mbipụta akwụkwọ, nke na-eme ka ogo nchọta ọchụchọ dị elu.
Ọ bụ ezie na enwere nnukwu mkpọtụ na ụlọ ọrụ ahụ banyere ogo nke infographics na-adaba na ugboro ole na - arịwanye elu - Ahụbeghị m ọdịda ọ bụla etu otu nnukwu ozi si arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ. Ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịchọpụta ma ozi infographic ga-arụ ọrụ nke ọma dịka ịchọrọ ya, mana nha anya maka ihe ịga nke ọma bụ maka ndị ahịa anyị… nyocha miri emi na nke ziri ezi, akụkọ ahụ na-adọrọ mmasị karị. ọ ka mma iji mee ihe ọmụma ahụ na-eduga na infographic nke na-arụ ọrụ!
Nke a bụ nnukwu infographic na Ala nke Infographics site na ulo akwukwo ahia di elu:
Tags: Infographics Ahịaala nke infographics
Jenụwarị 14, 2013 na 5:45 PM
Akwụkwọ akwụkwọ kọleji ga-abụ ihe mmụta dị irè karị ma ọ bụrụ na ibe ọ bụla enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị infographics. 😉